Semalt Content Marketing Mazano Anobatsira Kwazvo Bhizimisi Rose
Indaneti inodedzererwa nevashambadziri, vatengesi, mablogi, vatengesi uyevose varikukwikwidza kuti iwe unzwe. Pangosvika kuwanda kwezvakanyorwairi kuwedzera kuwedzera, kune huru yezana yezvinhu zvakaderera-izvo zvinoonekwamazuva ese. Pane chimiro chekusunungura zvinyorwa zvepasi-grade kuti "hype" it up uye kuwanaakacherechedza. Kunyange zvakadaro, kune rimwe bhizinesi, iro rinotarisana nekukura kwenguva refu,zvakakosha kuzviratidza nehuwandu hwehutano. Iwe unofanirwa kutengesa zvinyorwa zvakanyanya sechibereko chacho pachako. Julia Vashneva, mutungamirinyanzvi ye Semalt Digital Services, inotsanangura kuti chii chinoshandiswa mukudhinda tactics chinofanirangashandiswe nekambani yese kuitira kuti kubudirire.
Rinotanga nekusika zvakanakisisa zvakagadzirwa. Kana iwe ukashanda paIndaneti, zvino unofarira kugadzirwainofanira kuva mwoyo webhizimisi rako. Hazvina basa kuti misika yemusika uripi,izvo zvauri kutengesa, uye chii chaunotenga-chikwata. Nzira yaunozviratidza iwe pachakotsanangurira mufananidzo webhizimisi rako, mukurumbira wemazita, uye vateereri kutendeka. Sezvo iri paIndanetimuzvinabhizimisi, iwe unofanirwa kutumira mashoko akakodzera, anokurudzira kufunga kune vateereri vako.
Panzvimbo yekuisa vatengi vako pasi pekumanikidzwa kusingaperi kwekutengesa,edza kudzidzisa vanhu, uchivabatsira kuita zvisarudzo. Ita kuti vazvinzwevakangwara, vanofunga nezvekutsvaga uye vatori vemari, uye iwe zvechokwadi uchasimudzira kutengesa.Ramba uchigadzira zvinhu zvinokuvimbika uye zvinodzidzisa nguva dzose. Nokudaro, uchawana kuvimbikamumukati wako wakasarudzwa. Kana iwe uri chivimbiso chekutengesa kwezvinhu uye ruzivo,zvamunorayira zvinoratidzira mukuwedzera mari.
Kukurukurirana nevateereri kunokosha pakuvaka bhizimisi refu. Zvako zviripoinomiririra inzwi rako, iyo ndiyo inonyanya kushandiswa kune mumwe mutengesi, blogger kana mutengesi.Paunenge uine chimwe chinhu chinokosha chaunofanira kutaura, unofanira kunge uchiita kuti chinzwike. Sarudza paiyo nzira yakanakisisa yekushandura pfungwa dzako.
> Zvinogona kutaurwa mumashoko 140 kana kudarika? Edza tweeting .. Unofunga kuti inogona kuva blogpost? Isa iri pawebsite yako, mumwe munhu blog, upe pepa repavara kune vateereri vako kanakuisa iyo kumagazini kuti ibudiswe. Pane nzira dzakawanda dzekuparadzira zvayakagadzirisa.Funga pamusoro pewauri kutaura naye. Ndizvo vateereri vema YouTube vane hanya here? Kana, zvichida, thenhau yepamusoro inokodzera zviri nani? Yeuka, ndeye nzira yakanakisisa yekukurukuriranapamwe nevanogona vatengi kana vaverengi.
Ita Zvose Zvakakosha
Kana iwe wakambopinda mune dzidzo mukutaura pachena, kupa, kana kugadzirwa kwezvinhu,saka iwe wakatozvinzwa izvi. Kunyange zvakadaro, hazvikwanisi kutaurwa zvakakwana. Ziva vateereri vako.Chii chingava chinonyanya kukosha kune bhizinesi rako pane hukama hwawakavaka nawovateveri vako? Ivazive. Ziva kuti ndivanaani, zvavanoda, uye chii chavozvinoda. Kurukura navo zuva roga roga kuti uchengetedze ukama hwako huri kubudirira.
Shanda pfuma yezviri mukati uye wedzera kukosha kwayo kune muverengi. Iwe unofanirwaIva nechokwadi chokuti izvo zvauri kugovera zvinozopedzisira zvichishanda. Zviise iwe pachakoshangu dzevatengi vako. Ungada here kupedza nguva yako pakuverenga chimwe chisina kukosha?Zvakanaka, hapana anozofarira izvozvo. Asi kana iwe ukaunza pfungwa huru uye inonakidzaruzivo kune vateereri vako, ivo vachakupa mubayiro.
Sungura pfungwa yako uye utarise kubva kune ngirozi yakasiyana pane yako. Kuva nekugadzira uyeKufunga kubva mubhokisi kunobatanidza zvakasimba nevateereri vako. Uyezve,regai ivo vakuzivei. Isa zita rako, mufananidzo wako uye mini-bio kunze uko pamwe cheteyako zvayo. Vhura musuo uye rega vanhu vapinde. Vanhu pavanobatana newe semunhu, ivo vanowanzoteerera zvaunotaura.
Zvechokwadi, maitiro aya ose anova chikamu chehuwandu hwekutengesa sarudzo yako nguvaunoenda. Iwe unofanirwa kutevera mazano aya nguva dzose kuti uve mutungamiri mumhizha yako.Vose vatengi ve Semalt vanoziva kuti hutano hwehuwandu hutsva hutsvaiyo inokupa mubayiro mukuru. Inzwi rako rinova chibereko chako chinotungamirira Source .